Game Over (2019) | MM Movie Store
အိန်ဒယနိုငျငံ ဂူရျဂေါငျးမွို့မှာ မိနျးမငယျမြားကို ရကျရကျစကျစကျ ခေါငျးဖွတျသတျကာအလောငျးမီးရှို့ဖကျြစီးပဈတဲ့ စိတ်တဇလူသတျမှုတှေ ဆကျတိုကျဆိုသလို ဖွဈပျေါနပေါတယျအဲ့ဒိလိုဖွဈတာကလညျး နှဈသဈကူးရကျ ဒီဇငျဘာ ၃၁ မှပါ။
အဲ့ဒိလူသတျသမားကို ရဲတပျဖှဲ့ဘကျက ဘာသဲလှနျစမှမရသေးလိုရှာဖှလေို့လညျး မရသေးပါဘူးတဈရကျမှာတော့ ဒီဇငျဘာ ၃၁ နှဈသဈကူးညတဈညမှာပဲအကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ဝှီးခြဲပျေါရောကျနရေတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျဟာဒီလူသတျကောငျရဲ့ပဈမှတျဖွဈလာပါတော့တယျ
ဒီအခြိနျမှာ ဝှီးခြဲပျေါကမိနျးမငယျလေးကပဲ Game Over ဖွဈမလားလူသတျကောငျကပဲ Gmae Over ဖွဈမလားဆိုတာကိုတော့ ….India, Thriller လူသတျကားကောငျးကောငျးကွညျ့ခငျြတယျဆိုရငျတော့ဒီကားကို လကျအလှတျမခံပါနဲ့ခငျဗအြဓိက သရုပျဆောငျနရောမှာလညျး အခဈြဆုံး Taapsee Pannu ဖွဈနတေော့ပွောစရာကိုမလိုလောကျအောငျပါပဲ….
အိန္ဒယနိုင်ငံ ဂူရ်ဂေါင်းမြို့မှာ မိန်းမငယ်များကို ရက်ရက်စက်စက် ခေါင်းဖြတ်သတ်ကာအလောင်းမီးရှို့ဖျက်စီးပစ်တဲ့ စိတ္တဇလူသတ်မှုတွေ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒိလိုဖြစ်တာကလည်း နှစ်သစ်ကူးရက် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ မှပါ။
အဲ့ဒိလူသတ်သမားကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်က ဘာသဲလွန်စမှမရသေးလိုရှာဖွေလို့လည်း မရသေးပါဘူးတစ်ရက်မှာတော့ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ နှစ်သစ်ကူးညတစ်ညမှာပဲအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဝှီးချဲပေါ်ရောက်နေရတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာဒီလူသတ်ကောင်ရဲ့ပစ်မှတ်ဖြစ်လာပါတော့တယ်
ဒီအချိန်မှာ ဝှီးချဲပေါ်ကမိန်းမငယ်လေးကပဲ Game Over ဖြစ်မလားလူသတ်ကောင်ကပဲ Gmae Over ဖြစ်မလားဆိုတာကိုတော့ ….India, Thriller လူသတ်ကားကောင်းကောင်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကားကို လက်အလွတ်မခံပါနဲ့ခင်ဗျအဓိက သရုပ်ဆောင်နေရာမှာလည်း အချစ်ဆုံး Taapsee Pannu ဖြစ်နေတော့ပြောစရာကိုမလိုလောက်အောင်ပါပဲ….
(Google Drive) Small Size ~ Download